Mogadishu Journal » 2021 » May » 2
Muqdisho:-Shir u dhaxeeya xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta mucaaradka ah iyo wafdigii ka socday dowladda Qatar ee dhawaan soo gaaray Soomaaliya ayaa caawa ka socda Hotelka Decale ee u dhaw garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Wafdigan oo uu horkacayo Ergeyga Gaarka ah...
Taliye ku-xigeenkii ciidanka Booliiska Haramcad Muumin Ciise Max’uud iyo ciidamo uu wato ayaa galabta ka goostay dowladda federaalka. Sarkaalkan iyo ciidamadiisa ayaa ku biiray ciidanka taabacsan Mucaaradka ee la baxay Badbaado Qaran gaar ahaan kuwa fadhiyo aaga Mirinaayo. Muumin...
RW Rooble & xubno ka tirsan Musharaxiinta oo saddex qodob ka wada hadlay (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay xubno ka tirsan midowga Musharaxiinta Xubnaha uu la kulmay Rooble ayaa waxaa ka mid ahaa Madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Shiikh Axmed, Musharax Mustaf Dhuxulow iyo xubno kale. Masuuliyiintan ayaa ka...
Caro ka dhalatay cod sir ah oo laga duubay Wasiirka arrimaha dibadda Iran
Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa cafis weydiistay qoyska Qasem Soleimani kadib markii warbaahinta loo dusiyay cod sir ah oo uu ku sheegay in taliyaha la dilay uu door aad u weyn ka ciyaaray diblomaasiyadda. Soleimani, oo ahaa taliyihii qeybta howlgallada dibadda ee Ciidamada...
(Sawirro) RW Rooble oo qaabilay Dr. Multaq Alqahtani iyo wafdigii uu horkacayey
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergayga gaarka ah ee Wasiirka arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaallanka argagixisada Mudane Multaq Alqahtani. Waxay ka wada hadleen xoojinta...
Keita waa nin aan caadi aheyn laakiin Klopp ayaa ku adkeysanaya in ciyaaryahanka khadka dhexe uu weli ku sii jiro qorshihiisa
Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in Naby Keita uu wali qeyb ka yahay qorshayaashiisa mustaqbalka fog ee Liverpool, inkastoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu ku adkeysanayo xilli ciyaareed kale oo bilow ah oo kooxda ah. Dhaawacyada ayaa caqabad ku noqday Keita tan iyo markii uu kaga soo...
Musharaxiinta oo Baaq Muhiim ah u diray Ra’isul Wasaare Rooble kadib go’aankiii shalay
Muqdisho:-War Saxaafadeed kasoo baxay Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa lagu soo dhaweeyay go’aankii Xildhibaanada golaha shacabka uga laabteen mudo kororsiga sababay in dagaalo dhiig ku daataan ka dhaco magaalada Muqdisho. Golaha Midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale soo...
Jubbaland oo shaki gelisay go’aanka Farmaajo ku wareejinayo doorashada & amniga
Jubbaland ayaa ka hadashay sida ay u aragto go’aankii uu Baarlamanka ka horjeediyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejinayo Ra’isul Wasaare Rooble. Maamulka Jubaland ayaa shaki ka muujiyay qaabka...
Antonio Guterres oo mar kale fariin ku saabsan doorashada u diray Madaxda Soomaalida
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay go’aankii ay Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay ku joojiyeen muddo kororsiga. “Xoghayaha Guud wuxuu soo dhaweynayaa go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Federaalka uu ku...
(Sawirro) AFRICOM oo gaadiid Gaashaaman ku wareejisey ciidanka Kumandoska Danab
Taliska Howlgalka Mareykanka ee Afrika AFRICOM ayaa Ciidanka Kumaandoska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee DANAB ku wareejiyay Gawaarida Gaashaaman ee ay ku howlgalaan Ciidamada. Gawaaridan ayaa door Muhiim ka qaadan doona howlgalka Ciidamada Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay...
Dhacdo Naxdin leh: Wiil Soomaali ah oo labo walaalihiis ah ku dilay Maraykanka (Sawirro)
Wiil Soomaali ah ayaa la sheegay inuu xalay ku dilay labo wiil oo walaalihiis ka yar ahaa magaalada Kansas City gobolka Missouri ee dalka Maraykanka. Hanad C/casiis oo 20 jir ahaa ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay si bareer ah walaalihiis ka yar-yar oo xaafidul Quraan ahaa...